Ny Samsung Galaxy Watch 3 tafaporitsaka: interface sy fampiasa | Androidsis
Ny smartwatch manaraka avy amin'ny mpamokatra Koreana dia eo akaiky eo ihany. Andrasana ny Samsung galaxy watch 3 aseho amin'ny fomba ofisialy ny Samsung Galaxy Note 20 amin'ny 5 Aogositra. Ary tsikelikely isika dia hahalala antsipiriany bebe kokoa momba ity akanjo efa nandrasana hatry ny ela ity.
Efa nilaza taminay momba ny famolavolana izahay izany dia hanana ity famantaranandro marani-tsaina ity, izay hamely ny tsena ho lasa mpisolo toerana ny Apple Watch. Fantatsika izao ny Fifanarahana Samsung Galaxy Watch 3, ankoatry ny mampiavaka azy ara-teknika.
Vitsy ny fanovana ny Samsung Galaxy Watch 3
Amin'ny alàlan'ny sary samihafa izay efa tafaporitsaka, azontsika atao ny manamarina hoe hanao ahoana ny interface Tizen hampiasain'ity Samsung Galaxy Watch 3 vaovao ity. Raha ny hitantsika dia misy itovizany amin'ireo kinova taloha, ka tsy hahita endrika vaovao be loatra isika.
Mazava ho azy, hananantsika bezel mihodina eo am-pelatànantsika izay ahafahantsika miditra amin'ireo fiasa samihafa amin'ny fitaovana amin'ny fomba milamina kokoa. Ary ahoana ny toetra ara-teknika amin'ny Samsung Galaxy Watch 3? Eny, hahita dikanteny roa isika.
Amin'izany fomba izany dia manana maodely voalohany miaraka amina dial 41 mm isika, ary koa kinova faharoa lehibe kokoa izay mirehareha miantso 45 mm. Amin'ny sehatra teknika, ary araka ny hitanao, samy manana fitoviana lehibe izy roa.
Eny, ny efijery maodely kely kokoa dia ho 1.2 santimetatra, raha toa kosa ny kinova 45mm dia hisy tontonana 1.4-inch. Samy miaraka amin'ny fiarovana Gorilla Glass. Amin'ireo tranga roa ireo dia hanana tahiry 8 GB sy RAM 1 GB isika, ho fanampin'ny karazana sensor rehetra, ao anatin'izany ny ECG hanao electrocardiograms.
Ny tena maha samy hafa azy, ankoatry ny haben'ny efijery dia ho hitantsika amin'ny batterie, amin'ity fomba ity, ny maodely voalohany dia manana 247 mAh, raha mijanona 45 mAh ny dika 340 mm. Ny vidiny? Tsy maintsy miandry ny 5 Aogositra vao hahalala isika ohatrinona ny vidin'ny Samsung Galaxy Watch 3.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Sivanina ny interface sy ny endri-javatra an'ny Samsung Galaxy Watch 3
Safari Forever dia sehatra mahafinaritra miaraka amina tonian-dahatsary ankafizinao miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminao